သူခိုးက ယောကျာ်းကို ပွဲခြင်းပီးဓားနဲ့ထိုး မိန်းမက ကလေးကိုဖက်လို့ ကျောကိုပေး အထိုးခံကာ ဓားဒဏ်ရာ ၈ချက်နဲ သွေးအိုင်ထဲ လောကအလယ် ဖခင်မဲ့ကာကျန်ခဲ့တဲ့ သားငယ်လေးရယ် – Swel Sone News
သူခိုးက ယောကျာ်းကို ပွဲခြင်းပီးဓားနဲ့ထိုး မိန်းမက ကလေးကိုဖက်လို့ ကျောကိုပေး အထိုးခံကာ ဓားဒဏ်ရာ ၈ချက်နဲ သွေးအိုင်ထဲ လောကအလယ် ဖခင်မဲ့ကာကျန်ခဲ့တဲ့ သားငယ်လေးရယ်
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်တွင် တိုက်ခန်း ၄ လွှာထိ သူခိုးဝင်ရောက်ပြီး ပစ္စည်းယူ၊ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
မိမိနေအိမ်တိုက်ခန်း လုံခြုံရေး ဂရုစိုက်ကြပါ။ကျနော်တို့ တိုက် ၄ လွှာမှာ သူခိုးဝင်ပြီး လူသတ်သွားပါတယ်။ မနက် ၄ နာရီမှာ နောက်ဖေးပြတင်းပေါက်က ဝင်လာပြီး ယောက်ကျား ကို ဓားနဲ့ ထိုး အသေသတ်ပြီး မိန်းမ က ခု ဒဏ်ရာတွေ နဲ့ အရေးပေါ်မှာ ကလေးလေး ကျန်ခဲ့တယ် ။ပစ္စည်းတွေလည်းယူ လူလည်းသတ်သွားပါတယ်။
ရဲ က ဖြစ်ပြီးမှ လာမှာ။ ကိုယ့်အခန်းကို ဂရုစိုက် ပါ။လှေကားမှောင်နေရင် မီးထွန်းကြပါ။သခိုးက အမှောင်ကို အခွင့်ရေး ယူမယ်။မိသားစု ဘဝ တစ်ခု ပျက်စီးသွားပြီ။ခု အခန်းကို ချိတ်ပိတ်ထားပါတယ်။၁၁၈ လမ်းထိပ် တော်ဝင်ပလာဇာဘေးတိုက် မင်္ဂလာဈေး နား မှာပါ
သူခိုးရယ် ရက်စက်လိုက်တာ …???? ၁၁၈လမ်း…တော်ဝင်ပလာဇာဘေး..တောင်ညွန့်မြို့နယ် ၄ လွှာမှာ နေတာ လင်မယား ၂ ယောက်ရယ် သားလေး ၁ ယောက်ရယ် …30.7.2019..မနက် ၄နာရီမှာ သူခိုးဝင်ခိုးလာကာ…နိုးသွားတော့ (ဘဝတွေက သူခိုးတွေ့ရင် ငြိမ်ခံနေရမလားပဲ…)ပါလာတဲ့ ဓါးနဲ့ယောကျာ်းရော မိန်းမရော နိဓားနဲ့ထိုးသတ် …ယောကျာ်းက ပွဲခြင်းပီး ?မိန်းမက.. ကလေးကိုဖက်လို့..ကျောကိုပေး အထိုးခံကာ ဓားဒဏ်ရာ ၈ချက်နဲ့ …သွေးအိုင်ထဲ ??မိန်းမက အရေးပေါ် ရောက် ….? လောကအလယ် ဖခင်မဲ့ကာကျန်ခဲ့တဲ့ သားငယ်လေးရယ် ???
စိတ်မကောင်းစရာ သားအဖ နှစ်ဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ။ KG တန်း အရွယ် သမီးလေးက သွားတွေ အကုန် ကျွတ်ထွက်သွားတယ်
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်း ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်က သံသယတရားခံ အောင်ကြီးရဲ့ ရှေ့နေကို ပုဒ်မနှစ်ခုနဲ့ အမှုဖွင့်
မြေနုကျွန်း လုကြရာမှ လူ(၃၀) ကျော် အသတ်ခံရသည့် နေရာတွင် ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကို ရေငုတ်ပြီး ရှာဖွေပေးနေတဲ့ ဝေဠုကျော်
မြင့်မြတ် နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတူရိုက်ကူးရမှာမို့ အရမ်းဝမ်းသာပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ Maeya Sun Sun